Iimpawu zendoda egoism
Ngokutsho kweengcali zeengqondo, i-egoists yamadoda ininzi kunabesifazane. Umfazi ngamnye wesithathu udibana nokuzingca komntu wakhe. Ngokungathandabuzekiyo, ukunyaniseka komntu kuba yintlungu yeengxabano ezininzi zeentsapho. Cinga ezinye zeempawu zokuzingca kwabantu.
Ubungqina bendoda buvela rhoqo, kwaye unokuzibonakalisa kwiimeko ezahlukeneyo. Abasetyhini abaninzi, beza ekhaya emva komsebenzi womsebenzi onzima, baphoswa ngemisebenzi yasekhaya, kuba oku kuyimfuneko. Ibhinqa ihlamba, isusa, ilungiselela isidlo sakusihlwa, kunye nomlingane wakhe ngeli xesha "ngokulala" esithela esinqeni. Emva koko, uyaqonda ngokucacileyo ukuba esinye isiqingatha kunye ukhathele kwaye ufuna uncedo. Kodwa nangona kunjalo, nayiphi na isicelo sokuncediswa, unika impendulo yokuba le akuyona ibhizinisi lomntu. Yaye ukuba ithe yazeka - ingxaki yakhe.
Abasetyhini abaninzi bajongene nale meko. Ukuba umntu unentlungu encinci, ngoko ulala ngokukhawuleza kwaye ufuna ukunqunywa okhethekileyo kwaye rhoqo. Akakhathaleli ngeminye imicimbi yowesifazane wakhe, wenza konke kwindlela enokwenzeka, "ukuze anqunyulwe i-snot, atywe kwi-spoon," nangona ephethe i-malaise.
Enye imeko. Abanye abantu banentloni ngabani na, ukuthetha ngempilo yabo embi. Kodwa indoda egoist ngokuchasene nayo, inako ukwenza inkathazo epheleleyo ngenxa yokunyanzeliswa okuncinci kwaye yenze sengathi uyagula. Umzekelo, kufuneka ulungise ukuphuma ngokukhawuleza okanye uncede ukuzisa izinto ezithile endlwini, kwaye uqala ukukhalazela ukuba "ugula" kangangokuba akukho namandla okuya kudokotela. Kwaye, ngokuqinisekileyo uya kuba ngogqirha ugqirha aze akhononde ngokuthi "colic in the tummy".
Ezinye izinto ezahlukahlukeneyo zesintu
Eyaziwayo kumama amaninzi kunye nale meko elandelayo: Ibhinqa ligcina imali, ingazivumeli ukuba zithenge iintambo ezongezelelweyo, iidemon ngokuzithoba ukuba zigcine uhlahlo lwabiwo-mali. Ngeli xesha, umyeni uyazivumela ukuba athenge izinto ezibiza, ukutya kwiindawo ezibiza ngexabiso. Ezi zibonakaliso ezicacileyo zokuzingca. Okomnye, umzekelo, ibhinqa lilala neqondo lokushisa eliphezulu, kwaye indoda iya ngokuloba ngokuloba, kwibhola, njl. Okanye umfazi ukhathele kwaye uzama ukulala, kwaye ukhethiweyo wakhe ujika kwiTV, ngokukhawuleza.
Ukubonakaliswa okulandelayo kwendoda egoism. Nonke nisandula niya ekhonsathini, endiyithandayo. Kodwa xa umhlobo ebiza umnxeba, uyaziqhenya ngokuthi asizange siye ekhonsathini, kodwa "mna" kwakufanele ukuba kule konsathi. Kutheni oku kwenzekayo? Lo mqondiso wobugovu unxulumene nokuzithemba okuphantsi kunye nomnqweno wokuzibamba zonke iindlela. Mhlawumbi ebusheni bakhe, indoda yakho yazama ukuphunyuka ekunakekeleni kwabantwana, kwaye ngoko nayiphi na inzame yokukhanyela ukuthatha inxaxheba ebomini. Oku kufuthi kwenzeke kunye nala madoda angabonwanga nje oomama, kodwa acingwa kwaye abonwa njengomntwana omncinci, akavumelanga ukuba angayilindelanga isinyathelo esinye. Kule meko, umfazi kufuneka enze konke ukuze esikhundleni sokuba "Ndiye" uthe "thina". Kubalulekile ukwenza yonke imizamo yokuhlela yonke imisebenzi edibeneyo. Ndathengela ityiti, ndihlawula zonke iindleko. Ibhinqa kule meko kufuneka ibe yinto engcungcutheko nje ngexesha elifutshane.
Umzekelo olandelayo ungumqondiso oqaqambileyo wobugovu kubantu. Unayo i-candy yokugqibela, isiqhamo seidiya okanye enye ikhefu yakho. Ukhethiweyo wakho, ngaphandle kokungabaza, ungadla isiqephu sokugqibela semveliso, ngaphandle kokucinga ukuba unokuthanda ukuyidla. Oku kwenzeka nokuba abazali bakhe bamnyusa. Ukukulungisa le meko, ibhinqa ngexesha elicebisa ukuba libe yintombazana engenangqondo. Ngokomzekelo, ukuba wayidla i-"yummy" yokugqibela, zama ukuzenza ngathi "kwaye ziphi iidiliya"? Zama ukucaphukisa kuye. Ngexesha elizayo uya kubelana nawe okanye akunike iqela lokugqibela lamagilebhisi.
Abasetyhini abaninzi bayaziwayo ngeemeko ezinjalo. Kwaye badibana ngokuphindaphindiweyo ukuba abafazi bacinga ukuba i-egoism yindoda ibe yinto evamile. Kodwa ngale nto kufuneka ulwe, kuba nayiphi na ibhinqa ifuna ukuthandwa, kwaye ungenzi njengomama. Ngoko ke, ukuba umntu ubonisa iimpawu zokuzingca, kufanele ufumane indlela yokuphuma kwimeko ngokuchanekileyo. Kancinci, indoda yakho iya kuba ngumhlobo osenyameko.
Indlela yokuziphatha ngobudlelwane bokuqala nomntu
Amakhanda amakhwenkwe. I-Conservatism okanye ukunyaniseka okuncane?
Indlela yokufezekisa umntu, ukuba ufuna ukuba ngabahlobo nje
Indlela yokuqala ubomi obutsha emva kokuhlukana nomfana
Xe ekudleni inyama yaseKorea
Imvakalelo ayisoze yaphela ukuba ...
UGrigory Leps wenyusa u-Alexander Panayotov
UMitya Fomin wayephakathi kwezinto ezinzima zokulwa, ividiyo
Ngaba kunobungozi ukugqoka iimpahla zegolide?
I-Pangasius fillet kwi-sesame isonka
Iklabishi kwivenkile ye-microwave
Indlela yokwenza iipayi ngeebherberries ezibomvu: zokupheka ngeesanti kunye ne-puff pastry
Gubungela kwi-sofa ngezandla zakho
Luhlobo luni lobuncwane abantu abathandayo?